yenyusa indlela yokusebenza kwematshini yokuvelisa
Kukho uhlalutyo malunga nemveliso yokusebenza ngempumelelo komatshini wokuprinta irayisi,Kufuneka siyiqonde ngokupheleleyo indima ebalulekileyo yokuphuculwa komatshini wokulungisa irayisi, Yila isicwangciso-qhinga sophuhliso lwesayensi ukuphucula ukusebenza kwematshini yokulungisa irayisi.Ukusebenza kwesiqhelo komatshini wokulungisa irayisi akunakuphucula ukusebenza ngokukuko kuphela kodwa kunokukhulisa ubomi benkonzo yomatshini wokulungisa irayisi, kodwa kwakhona vumela umqhubi ukuba anciphise imeko yeengozi ngexesha lokusebenza.
1.Jonga ukuhlangana kunye nokubumba okuphezulu kunye nokubumbana, Jonga ukuba isixhobo esimiyo siyazifezekisa iimfuno. Umatshini wokulungiselela iirayisi emva kokuqalisa komoya oza malunga 2 imizuzu, ukuba ifunyenwe inesandi esingaqhelekanga okanye ukusilela kufuneka kuyeke ngoko nangoko, izakuba nengxaki, kude kubekho umatshini wokulungisa irayisi emva kwayo yonke into eqhelekileyo ukuqala umsebenzi.
2. Xa irayisi iphinde yenziwa, umbane kufuneka ucinyiwe kwaye umile. Xa indawo yokulungisa irayisi iyasebenza, ngasemva komatshini akuvumelekanga ukuba ume. Umatshini wokulungisa iirayisi uqhelekile, kufuneka ayeke ukulungiswa. Kuthintelwe ngokungqongqo ukusebenzisa isandla ukulungisa umatshini wokulungisa irayisi, ukwenzela ukunqanda ukwenzakala kwisandla.
3.Thobela ngokungqongqo umatshini wokulungisa irayisi, ngokwemiqathango yendlela yokusebenza yokunxiba izixhobo zokukhusela abasebenzi. Ngaphambi kokuba uqale ngokujonga imoto ngononophelo, utshintsho, imigca kunye nokubeka phantsi kuyinto eqhelekileyo, ilizwe elomeleleyo, Jonga ulawulo loomatshini lwamacandelo ahlukeneyo, amaqhosha, njl. zikwindawo echanekileyo.
Ukuqonda okuqinisekileyo kunye nokufundisisa okunzulu kwendima ebalulekileyo UPHANDO LOKUQHUTYELA I-RICE nempembelelo yayo, kunye nokwenziwa kobuchule bophuhliso lwesayensi. umatshini wokulungisa irayisi kwinyathelo lokuqala lokwenza umsebenzi olungileyo wengqolowa, ukugcina ulungelelwaniso lokuhambisa irayisi kunye nemfuno, kunye nokukhuthaza ukukhula okuphucukileyo koqoqosho lwase-China kubaluleke kakhulu
Nxibelelana nathi ukuze wandise umatshini wokulungisa irayisi